Fivarotana Forex vaovao niparitaka - ny brokers an-tsarimihetsika Forex malaza indrindra
Home / About / Nahoana no FXCC / Niely
Ny fanaparitahana dia iray amin'ireo fepetra lehibe amin'ny varotra sy fampiasam-bola amin'ny Forex. Tokony ho fantatrao hoe inona ny Forex miparitaka raha te-varotra amin'ny tsenambola ifanakalozana vahiny ianao.
Ny fanaparitahana dia vola lanin'ny mpivarotra isaky ny fifanakalozana. Raha avo ny fiparitahana dia hiteraka fiakaran'ny vidin'ny varotra izay hampihena ny tombom-barotra amin'ny farany. FXCC dia broker voafehy izay manolotra fielezana henjana amin'ny mpanjifany.
Inona no miparitaka amin'ny Forex?
Ny fanaparitahana dia ny mahasamihafa ny vidin'ny fividianana sy ny vidin'ny fivarotana ny fananana.
Amin'ny tsenan'ny vola mahazatra, ny fifampiraharahana dia atao amin'ny fotoana rehetra, fa ny fiparitahana dia tsy maharitra amin'ny toerana rehetra. Mba hahatakarana ny antony hitrangan'izany, dia ilaina ny mahatakatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny vidin'ny fividianana sy fivarotana vola rehefa manombatombana ny varotra, izay mamaritra ihany koa ny fahavoazan'ny tsena.
Eo amin'ny tsenan-tahiry sy Forex, ny fanaparitahana dia ny mahasamihafa ny vidin'ny fividianana sy fivarotana. Ny fiparitahan'ny Forex dia ny mahasamihafa ny vidin'ny fangatahana sy ny vidin'ny tolo-bidy.
Inona no atao hoe tolotra, angataho ary ny fifandraisany amin'ny fanaparitahana?
Misy karazany roa ny vidiny eny an-tsena:
Tolotra - ny vola kasain'ny mpividy ny fananana vola.
Anontanio - ny vidiny kasain'ny mpivarotra fananana vola.
Ary ny fielezana dia ny tsy fitovizan'ny 'bid and ask' voalaza tetsy aloha izay mitranga mandritra ny fifanakalozana. Ohatra tsara amin'ny fifandraisan'ny tsena mangarahara ny fanolorana bazaar rehefa apetraka ny vidiny ambany ary ny mpangataka faharoa dia manaraka ny takiana amin'ny taha ambony.
Inona ny Forex miparitaka amin'ny lafiny broker?
Raha ny fahitan'ny broker an-tserasera ny Forex spread dia iray amin'ireo loharanom-bola voalohany, miaraka amin'ny kaomisiona sy ny swap.
Rehefa avy fantatsika ny atao hoe fielezana amin'ny Forex dia andao hojerentsika ny fomba fanisana azy.
Ahoana ny fikajiana ny fiparitahana amin'ny Forex?
Ny mahasamihafa ny vidin'ny fividianana sy ny vidin'ny fivarotana dia refesina amin'ny isa na pips.
Ao amin'ny Forex, ny pip dia isa nomerika fahefatra aorian'ny teboka decimal amin'ny tahan'ny fifanakalozana. Diniho ny ohatray momba ny tahan'ny fifanakalozana euro 1.1234 / 1.1235. Ny fahasamihafana misy eo amin'ny tolotra sy ny fangatahana dia 0.0001 XNUMX.
Izany hoe, ny fiparitahana dia pip iray.
Eo amin'ny tsenan-tahiry, ny fielezana dia ny mahasamihafa ny vidin'ny fiarovana sy fividianana fiarovana.
Ny haben'ny fielezana dia miovaova arakaraka ny broker tsirairay sy ny tsy fetezana ary ny habetsaky ny fefy mifandraika amin'ny fitaovana manokana.
Ny mpivarotra indrindra vola mpivady dia ny EUR / USD ary matetika, ny ambany indrindra dia ny EUR / USD.
Ny fiparitahana dia azo amboarina na mitsingevana ary mifanaraka amin'ny habetsaky ny tsena napetraka.
Ny mpivarotra an-tserasera rehetra dia mamoaka famafazana mahazatra ao amin'ny pejy Fifanarahana momba ny fifanarahana. Amin'ny FXCC, ny fielezana dia azo jerena amin'ny 'fielezana mahomby antonony'pejy. Ity dia fitaovana tokana mampiseho ny tantaran'ny fiparitahana. Ireo mpivarotra dia afaka mahita ireo tsipika miparitaka sy ny fotoana fitifirana amin'ny indray mipi-maso iray.
Ohatra - ny fomba fanaovana kajy ny fiparitahana
Ny haben'ny fampielezana aloa amin'ny euro dia miankina amin'ny haben'ny fifanarahana varotrao sy ny sandan'ny pip isaky ny fifanarahana.
Raha mandinika ny fomba fanaovana kajy ny fiparitahana amin'ny Forex isika, ohatra, ny sandan'ny pip isaky ny fifanarahana dia singa folo amin'ny vola faharoa. Raha atao dolara dia 10 $ ny sandany.
Ny sanda pip sy ny haben'ny fifanarahana dia samy hafa amin'ny broker na broker - aza hadino ny mampitaha ny masontsivana mitovy raha mampitaha ny famafazana roa amin'ny mpivarotra varotra roa.
Amin'ny FXCC, azonao atao ny mampiasa a kaonty demo hahita ny fielezana amin'ny fotoana tena izy eo amin'ny lampihazo na manisa ny fiparitahana amin'ny fampiasana calculatera fivarotana.
Ireo singa miantraika amin'ny haben'ny fielezana amin'ny Forex
Inona avy ireo antony manaparitaka ny varotra?
Fahamaroan'ny fitaovana ara-bola lehibe
Ny habetsahan'ny varotra amin'ny fitaovana ara-bola
Ny fiparitahan'ny CFD sy Forex dia miankina amin'ny fananana ifotony. Arakaraka ny maha-mavitrika ny fananana no amidy, arakaraky ny habetsaky ny tsena ao aminy no mihabe ny mpilalao ao amin'ity tsena ity dia tsy dia hiseho ireo banga. Ny famafazana dia avo amin'ny tsenan-tsiranoka kely kokoa toy ny mpivady vola vahiny.
Miankina amin'ny tolotra ataon'ny mpivarotra dia mety hahita fielezana raikitra na miovaova ianao. Tsara homarihina fa ny fielezana raikitra dia matetika tsy omen'ny brokers tombam-barotra mandritra ny vanim-potoana miovaova eo amin'ny tsena na fanambarana makroekonomika.
Ny fielezana dia miova arakaraka ny toetoetran'ny tsena: mandritra ny fanambarana makro manan-danja dia mihitatra ny fiparitahan'ny dokambarotra ary ny ankamaroan'ny brokers dia tsy manome toky ny fiparitahana mandritra ny fanambarana sy ny vanim-potoana miseho.
Raha mieritreritra ny varotra ianao mandritra ny fivorian'ny Banky foibe eropeana na raha manana fanambarana lehibe ny Fed dia aza manantena ny hitovizan'ny fielezana toy ny mahazatra.
Kaonty Forex tsy misy fielezana
Manontany tena ve ianao raha azo atao ny mifanakalo Forex tsy misy fiparitahana?
Kaonty ECN dia kaonty novonoina nefa tsy nandraisan'ny mpivarotra anjara. Tsy manana afa-tsy fielezana kely amin'ity kaonty ity ianao, ohatra, 0.1 - 0.2 pips amin'ny EUR / USD.
Ny broker sasany dia mitaky sarany raikitra isaky ny fifanarahana nifarana fa ny FXCC dia miampanga fotsiny fa tsy misy komisiona.
Ny fiparitahan'ny Forex tsara indrindra, inona izany?
Ny fanaparitahana tsara indrindra eo amin'ny tsena Forex dia ny fiparitahan'ny banky.
Ny fiparitahan'ny forex interbank dia ny tsenan'ny fifanakalozam-bola vahiny ary ny fiparitahana eo amin'ny tahan'ny fifanakalozana BID sy ASK. Mba hidirana amin'ny fiparitahan'ny interbank dia mila STP or Kaonty ECN.
Ahoana ny fomba hahitana ny fiparitahan'ny MT4?
Sokafy ny MetaTrader 4 sehatra fifanakalozana, mankanesa any amin'ny fizarana "Market Watch".
Manana fidirana amin'ny fomba roa ampidirina aorinao ao amin'ny sehatra fivarotana MT4 ianao:
Tsindrio havanana amin'ny faritra fiambenana tsena ary kitiho ny "spread". Ny fielezana fotoana tena izy dia hanomboka hiseho eo akaikin'ny tolotra ary hanontany ny vidiny.
Ao amin'ny tabilao fivarotana MT4, tsindrio havanana ary safidio ny "Properties", avy eo, eo am-baravarankely misokatra, safidio ny tabilao "General", zahao ilay boaty eo akaikin'ny "Asehoy ny tsipika ASK," ary kitiho ny "OK."
Inona ny fielezan'ny Forex - ny dikan'ny fielezana amin'ny varotra?
Ny mpivarotra tsirairay dia manana ny lanjany amin'ny fahatsapana ny vidin'ny fanaparitahana.
Miankina amin'ny paikady varotra ampiasaina izany.
Arakaraky ny hakelin'ny fe-potoana sy ny fahamaroan'ny fifanakalozana no tokony hitandremana tsara kokoa rehefa manaparitaka.
Raha mpivarotra savily ianao izay te hanangona pips marobe mandritra ny herinandro na volana maromaro aza, ny haben'ny famafazana dia tsy misy vokany aminao raha oharina amin'ny haben'ny fihetsika. Fa raha mpivarotra andro na mpanam-bola ianao, ny haben'ny fielezana dia mety hitovy amin'ny fahasamihafana eo amin'ny tombom-barotrao sy ny fatiantoka.
Raha miditra sy mivoaka tsy tapaka amin'ny tsena ianao, dia mety hitombo ny vidin'ny fifanakalozana. Raha ity ny paikadim-barotrao dia tokony apetrakao ny baikoo rehefa tsara ny fanaparitahana.